YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, April 24
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စာရင်းကို နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံချက် ရေးဆွဲ ကာစနစ်တကျစာရင်းကောက်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမ၀င်ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း စစ်ဆေးရေး (ဆွဲ၊တင်၊စစ်)လုပ်ငန်းအားစီမံချက် ရေးဆွဲကောက်ခံသွား မည်ဟု ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ မှ မီဒီယာများသို့ ပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီများ၏ စာရင်းမှာ တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးသည့်ပြင် တစ်ချို့မှာ နေရာဒေသများကိုလည်း ဖျောက်ဖျက်ထားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်စာရင်း အား စနစ်တကျ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီးမှသာ နေရာချထားရေးကို ထည့်တွက်စဉ်းစားနိုင်မည်ဟုလည်းသိရသည်။
စာရင်းကောက်ယူရန်အတွက် ရာထားချက်များမှာ (၁) မောင်တောတွင် ဘင်္ဂလီ အိမ်ထောင်စု ၉၀၁၃၉၊ ကမန်၂၊မရမာကြီး ၅၅၊အိန္ဒိယ၅၃၄၊အခြား ၇၂ ၊စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၉၀၈၀၂ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်း။
(၂) ကျောက်ဖြူတွင် ဘင်္ဂလီ ၁၉၇၃၊ကမန် ၄၅၃၊မရမာကြီး ၁၃၆၊ဟိန္ဒူ ၄၄၊ အခြား ၆၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၆၁၂ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်း။
(၃)စစ်တွေတွင် ဘင်္ဂလီ ၃၃၉၂၇ ၊ကမန် ၇၀၈ ၊မရမာ ကြီး ၁၀၉၂ ၊ဟိန္ဒူ ၃၆၈ ၊အခြား ၁ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၆၀၉၆ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်း၊
(၄)သံတွဲတွင် ဘင်္ဂလီ ၁၇၉၇၊ ကမန် ၅၄၆၊မရမာကြီ ၂၊ဟိန္ဒူ ၂၊ အခြား ၈စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု ၂၃၅၅ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်းလည်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဘင်္ဂလီများအား စာရင်းကောက်ယူရာတွင်မြို့နယ် ၁၄ ခုတွင် ရှိနေသည့် ဘင်္ဂလီအိမ်ထောင်စုများအား ဆွဲ၊တင်၊စစ် စနစ်ဖြင့်ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းအတိအကျ ရရှိရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခ သည်များ၏စာရင်းမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး စာရင်းကောက်ခံရာတွင်လည်း အတည်ငြိမ်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းကိုရရှိထားသော်လည်း ဘင်္ဂလီဒုကသည်စာရင်းမှာ မကြာခဏ ပြောင်းလဲနေပြီး စစ်ဆေးတိုင်း တည်ငြိမ်မှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့မှမေလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့်ကြာ စာရင်းပြုစုကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် ဂျွန်လ ၃၀ တွင် ဘင်္ဂလီလူဦးရေစာရင်း အား အတည်ပြု ထုတ်ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည် လုံးဝမရှိသော မောင်တောမြို့နယ်ကဲ့သို့သော နေရာများတွင်လည်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီများသည် စာရင်းကောက်ခံရာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည့်အတွက် စာရင်းများအား ထပ်မံကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းမှ စာရင်းအတိကျကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လည်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ရှိသော ဘင်္ဂလီအင်အားကိုသိလိုခြင်း၊ ခိုးဝင်ခိုးထွက် လူစာရင်းများအားသိလိုခြင်းတို့ကြောင့် ကောက်ခံရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းကပြောသည်ဟုသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်း ၁၃၅ သာရှိကြောင်း၊ ယင်းအတွက် စာရင်းကောက်တဲ့သည့်အခါတွင် ရိုဟင်ဂျာစာရင်းကောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီစာရင်းကို သာ ကောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဘင်္ဂလီဟု လွတ်လပ်ရေးမရမီကပင် သုံးစွဲခဲ့သည့် အတွက် ၊စာရေးရာတွင် လည်း ဘင်္ဂလီဟုသာ မှတ်တမ်းပြုစုထားခဲ့ခြင်းများရှိသည့် အတွက် ဘင်္ဂလီကိုသာ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှသိန်းကပြောကြားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
BY YeYint Nge ... 4/24/20130comment
ရေနံပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းခ တစ်နှစ်လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၀၉၅ သန်းနှင့် နှစ်စဉ်ရေနံတင်ပို့ခ ၂၂ သန်း
ကိုယ်တွေက တစ်နှစ် ၂၂ + ၆ = ၂၈ သန်းရမယ်၊ သူတို့က ခရီးစရိတ် တစ်နှစ် သန်း ၁၀၀ လောက် သက်သာမယ်၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ရေနံကို မလက္ကာ ရေလက်ကြားက ဖြတ်သယ်တာထက် ကျောက်ဖြူ ကတဆင့် ကူမင်းကိုသယ်ရင် တွက်သာကြည့်ကြတော့ အချိန်လဲ တစ်ပါတ်လောက် သက်သာ ကုန်ကျစရိတ်လဲ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် သက်သာ၊ .....
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံပိုက်လိုင်းမှ နေ့စဉ်ရရှိမည့် ရေနံစိမ်း စည်ပေါင်း ၄၅၀၀၀ ၀န်းကျင်ကို ချက်လုပ်နိုင်ရန် ရေနံချက်စက်ရုံ တစ်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည်
Wednesday, 24 April 2013 21:01
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံပိုက်လိုင်းမှ နေ့စဉ်ရရှိမည့် ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း ၄၅၀၀၀ ၀န်းကျင်ကို ချက်လုပ်နိုင်ရန် ရေနံချက်စက်ရုံ တစ်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မူလအစီအစဉ်အရ ရေနံချက်စက်ရုံကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မန်းသံပုရာကန် ရေနံချက်စက်ရုံ အနီးတွင် တည်ဆောက်ရန် အကြမ်းဖျင်း လျာထားကြောင်း သိရှိရသည်။
''မြန်မာ-တရုတ် ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းဟာ မြန်မာနဲ့တရုတ် နှစ်ဖွဲ့ပိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က နှစ်စဉ် တစ်နေ့ကို ရေနံစိမ်း ဆီပေါင်း ၄၅၀၀၀ လောက် ထုတ်ယူဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေ ရေနံစိမ်းတွေ ရယူပြီး ရေနံချက်စက်ရုံ တစ်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမီးခုံ ဧရိယာမှာ တည်ဆောက်ဖို့ မူလစဉ်းစားထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဆီမီးခုံဧရိယာမှာ တည်ဆောက်လို့ရှိရင် နောက်ထပ်မြေ ထပ်သိမ်းရတဲ့ အခြေအနေတွေ ထပ်ဖြစ်လာပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆီမီးခုံနဲ့ မလှမ်းမကမ်း မြစ်ရဲ့အရှေ့အနောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့ လက်ရှိ မန်းသံပုရာကန် ရေနံချက်စက်ရုံမှာ ကျွန်တော်တို့ မြေအနည်းငယ် ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် စက်ရုံကို တည်ဆောက်မယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း လျာထားပါတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်သုံးဆီ ဈေးကွက်မှာ သာမန်အားဖြင့် ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍတွင်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် စက်သုံးဆီများကို ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍတွေ အများကြီး သိပ်ပြီးတော့ မတိုးချဲ့တော့ပါဘူး။ အခုမြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်မယ့် ရေနံချက်စက်ရုံသည်ပင် ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ နိုင်ငံတော်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီအတွက် Joint Venture ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခေါ်ပြီးတော့ လုပ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်''ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေနံပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ CNPC-SEAP မှ ၅၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ၄၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ရေနံပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းခ တစ်နှစ်လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၀၉၅ သန်းနှင့် ရေနံတစ်စည် ဖြတ်သန်းခ ရေနံပမာဏ တစ်တန်လျှင် အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာသာ ရရှိမည်ဖြစ်ကာ တစ်နှစ် ရေနံစည် ၂၂ သန်း တင်ပို့မည် ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်စဉ်ရေနံတင်ပို့ခ ၂၂ သန်း ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် မကွေးတိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်အား ဖြတ်သန်းသွားပြီး ဧရာဝတီမြစ်အောက် ဖြတ်သန်း ဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သဘောတူစာချုပ် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ပါဝါ နှင့် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ
ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကို ထောက်ခံပါကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ပြောကြား
on Thursday, 25 April 2013 03:50
ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကို ထောက်ခံပါကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူစီလိုယူဒိုယိုနိုက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
"အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူစီလိုယူဒိုယိုနိုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့အနေနဲ့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံကိုလည်း ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး သမ္မတကြီးကို ပြောခဲ့ပါတယ်" ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူစီလိုယူဒိုယိုနိုသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ် ဧပြီ ၂၃ ရက်နှင့် ၂၄ ရက်များတွင် လာရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေး တိုးမြှင့်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင် သဘောတူစာချုပ်၊ လူ့စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ၊ ဆန်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတက မိမိအနေဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေး ကဏ္ဍနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍများတွင် ထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုများကို တွေ့ရှိရသဖြင့် များစွာ ချီးကျုးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထောက်ခံအားပေးသကဲ့သို့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အစိုးရပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုလာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏကိုလည်း လာမည့်နှစ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ ထိ ရောက်ရှိအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်များအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အကြမ်းဖက်မှုများကို မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန် တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူစီလိုယူဒိုယိုနိုက မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ ပဋိပက္ခသည် ဒေသတွင်းရှိ အခြားသော မွတ်စလင်များ အတွက်လည်း ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပဋိပက္ခကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ် မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မကောင်းရုံသာမက မွတ်စလင်အများစုဖြစ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အတွက်လည်း မကောင်းကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူစီလိုယူဒိုယိုနိုက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ပြေးဆွဲမည့် မိုးပျံရထားစနစ် ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လျာထား
on Wednesday, 24 April 2013 21:08
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားစနစ် တိုးချဲ့ခြင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ပြေးဆွဲမည့် မိုးပျံရထားစနစ်ကို ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် လျာထားကြောင်း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရ စီးမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား စနစ်တိုးချဲ့ရာတွင် မြို့တွင်းမြို့ပတ် ရထားလမ်းများ တိုးချဲ့ခြင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့ပြင်မှပတ်၍ အမြန်မြို့ပတ်လမ်းနှင့် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ သိပ်သည်းမှု များနေသော ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗဟိုစီးပွားရေး ဇုန်အတွင်း ယာဉ်သိပ်သည်းမှုနှင့် သွားလာမှု လျော့ချနိုင်ရန် မြို့လယ်ဧရိယာအတွင်း ပတ်၍ ပြေးဆွဲနိုင်သော မိုးပျံရထား စနစ်များပါ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဒေသန္တရ စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း၌ လျာထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပိုမိုကြုံတွေ့ လာရခြင်းကြောင့် ယာဉ်အသုံးပြုမှု လျော့ကျကာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့နည်းစေရေးအတွက် ရထားပို့ဆောင်ရေး စနစ်အား မြှင့်တင်ရန် မြို့ပြစီမံကိန်း ပညာရှင်အချို့က ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
ထို့အတွက် မြို့ပတ်ရထားလမ်း စနစ်အား ယခုထက် ပိုမိုချဲ့ထွင်ခြင်းအပြင် လက်ရှိပြေးဆွဲနေသော ရထားခရီးစဉ်များကိုလည်း ပုံမှန်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရသည်။
မိုးပျံရထားလမ်းစနစ် တည်ဆောက်ရန်မှာမူ နည်းပညာပိုင်း၊ ငွေကြေးပိုင်း လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးမည်မျ သုံးစွဲမည် ဆိုသည်ကိုမူ ဒေသန္တရ စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ မိုးပျံရထားလမ်း စနစ်သည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများဖြစ်သော ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ စသော နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုနေသည်။
'' စိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ် သို့ ဖြေကြားစာ"
Dhammavira Ashin's photo.
မူဆလင်ဒကာကြီး စိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ် မှ မတူကွဲပြားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒကာကြီး ဦးနေမျိုးဝေ ၏ ၄င်းတို့၏ အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ ကုရ်အာန် ကျမ်းအား ယုတ္တိကျကျ ထောက်ပြဝေ ဘန်မှုအား ကျနသေခြာ ပညာရှိများ လက်ခံနိုင်လောက်သည့်အထိ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါပဲ၊ မိုးကြိုးကို ထန်လျှက်နှင့်ကာသည့်ပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပင် ပြန်လည်၍မေးခွန်းထုတ်ထားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
ထို မူဆလင်ဒကာ၏ မေးခွန်းအားလုံးဟာ ဒကာကြီး ဦးနေမျိုးဝေ မှ ကုရ်အာန်ကျမ်းအားဝေဘန်သကဲ့သို့ ကျမ်းစာထဲမှ ထုတ်နှုတ်ကာထောက်ပြထားသကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာထေရ၀ါဒ ပိဋကတ် တော် များကို အပေါ်ယံလေးမျှပင် လေ့လာခြင်းမရှိပါပဲလျှက် ကလေးဆန်ဆန်ဟာသသဘောမျှ မေး ခွန်း ထုတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ၄င်းမေးခွန်းများအား ဖြေရှင်းပေးပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေ စာဖတ် ပရိဿတ်များမှ လျှောက်ထားကြသောကြာင့် အချိန်လေးရခိုက် ဖြေကြားပေးလိုက်ရပါသည်။
မူဆလင်ဒကာများအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓပိဋကတ်တော်များအား ဝေဘန်မည်ဆိုပါက ဒကာကြီး ဦးနေမျိုးဝေသည် ကုရ်အာန် အားထောက်ပြဝေဘန်ထားသကဲ့သို့ ပိဋကတ်တော်များမှ ထုတ်နှုတ်ကာ ဝေဘန်နိုင်သော စွမ်းရည်များရှိလာအောင် ကြိုးစားလေ့လာကြဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ ခုဒကာကြီးေ မးထားသော မေးခွန်းများမှာ မူကြိုအဆင့်ပင် မရှိပဲ ဖြေပေးရမှာပင် အရမ်းပျင်းစဖွယ် ကောင်းလှ ပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာ ပိဋကတ်တော်များထဲမှ ထုတ်နှုတ်ကာ မေးနိုင်လိပ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါရစေ။
ဒကာကြီးစိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ် မေးထားသောမေးခွန်းတွေထဲက ပထမဆုံးမေးခွန်း ကိုဦးစွာဖြေပေးပါမည်။ဒကာကြီးမေးထားတာက…
(၁)=ရှင်ကြီး ဂေါတမရဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံတောင် သီရိလင်္ကာမှာ သက္ကတနဲ့ ရှိနေပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပါဠိနဲ့ ရှိနေပါတယ်။သက္ကတလို ရှိနေတဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံကို သုံးကြိမ်သုံးခါပဲပြင်ပြီး (သံဃယနာတင်ပြီး) ပေမယ့်၊ ပါဠိလိုဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းက ပိဋကတ်သုံးပုံက ဘာဖြစ်လို့ ခြောက်ကြိမ်ထိ ပြင်ထားရပါသလဲ?
ဒကာကြီးမေးစိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ်ရေ ယခုဦးဇင်းကိုယ်တိုင် သီရိလင်္ကာမှာ ရောက်ရှိ ပညာ တော်သင်ယူနေပါသည်။ဒကာပြောသလို သီရိလင်္ကာမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို သက္ကတဘာသာဖြင့် ရေး သားထားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ထုတ်ဝေခြင်း၊လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါဘူးဒကာ၊ သီရိလင်္ကာမှ မဟုတ် ပါဘူး၊ထိုင်း၊ကမ္ဗောဒီးယား၊လာအို၊မြန်မာ စသောမည့်သည့်ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံမှာမှ ပိဋကတ်တော်များကို သက္ကတဘာသာခြင်း ရေးသားထားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရိပါဘူးဒကာ။ ပါဠိဘာသာဖြင့်သာ စနစ်ကျကျ တည်ရှိပါတယ်ဒကာ။
နောက်တစ်ခုက သင်္ဂါယနာကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဂါယနာ တင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုက ဗုဒ္ဓမြတ်၏ ဒေသနာတော်မြတ်တို့အား ၊”ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်နှုတ်ခြင်း၊ဖြည့်စွက်ခြင်း ”လုံးဝမပြုရ လေအောင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ လက်ထက်တော်ကာလ ကအတိုင်း မူရင်းကျကျ ဖြစ်ရအောင် သင်္ဂါယ နာတင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒကာကြီးက လေ့လာမှုမရှိပဲ ပြောင်းပြန်ပြောနေ ခြင်း ဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်္ဂါယနာတင်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဒေသနာတော်တို့ကို ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ခိုင်လုံးသော အထောက်အထားပြနိုင်ပါက၊ ဒကာကြီးတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကောင်းတာ မကောင်းတာမစဉ်းစားပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲကို ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပါမည်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဒကာကြီး စိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ်။
ဒကာကြီးပြောသလို ကုရ်အာန်စာအုပ်ဟာ ကောင်းကင်ပေါ်က ကျလာသည် ဆိုသော တိကျ ခိုင်လုံ၊အာဂမ၊သဘာဝယုတ္တိရှိရှိ ကမ္ဘာကြီးအားချပြနိုင်မည်ဆိုပါက ဒကာကြီးတို့၏ မူဆလင်အနွယ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ တိုးပွားများပြားလာနိုင်သောကြာင့် ကုရ်အာန် စာအုပ်ကျလာပုံကို ယုတ္တိရှိရှိ သက်သေပြသင့်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် အကြံပေးလိုက်ပါသည် ဒကာ။
(၂) ဒကာကြီး၏ ဒုတိယမေးခွန်းဖြစ်သော မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ တက်တက်စင်အောင် ကွဲနေတာတွေ ဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲ? ဟူသောမေးခွန်းကို ဖြေကြားပေးပါမည်။
ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာနဟာ အပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဍာန်တို့ဟာ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေတာမှန်ပေမဲ့ ‘အနှစ်သာရ’ ကတော့ လုံးဝအတူချည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန နှစ်ခုလုံးသည်
I have studied Mahayana for many years and the more I study it, the more I find there is hardly any difference between
Theravada and Mahayana with regard to the fundamental teachings.
ထိုကဲ့သို့ အနှစ်သာရပိုင်းမှာ ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာနဟာ အားလုံးလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဟာ အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ဦးဇင်းတို့၏ ၀ါဒနှစ်ခုလုံးဟာ ဒကာကြီးတို့မူဆလင် ဂိုဏ်း ကွဲများဖြစ်သော ဆွန်နီမူဆလင် နှင့် ဆီးရိုက်မူဆလင်တွေလို အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊စသည်များပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒကာ ဒါဟာ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမတရားတော်များနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒကာ။လောကမှာ ‘ကိုးကွယ်စရာ များစွာရှိနိုင်ပေမဲ့လည်း အေးချမ်းညိမ်းအေး၊ လွှတ်မြောက်ကြောင်း အမှန်တရားတော်ကတော့ တစ်ခုတည်းပဲရှိနိုင်ပါတယ်’ ဒကာကြီး။
ဒကာကြီးတို့ မူဆလင်များကိုယ်တိုင် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ငါတို့ဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေကြသသလဲ …? ဆိုသော မေးခွန်းကိုမေးပြီး အသိပညာဖြင့် မှန်ကန်စွာ ဖြေနိုင်ဖို့ ဘာသာစွဲကင်းကင်းဖြင့် ဖြေကြားအဖြေထုတ်ကြည့်ကြပါ။ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်လို၍၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းသာယာလို၍၊စသောကောင်းမြတ်သော လိုအင်ဆန္ဒကြောင့် အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ၊အစ္စလာမ်ဘာသာက မိမိတို့ လိုလားတောင်းတသော အေးချမ်းမှုနှင့် အမှန်တရားကို အမှန်တကယ်ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိ၊မရှိ ဆိုတာကို တွေးတောဆင်ခြင် လေ့လာသင့်ပါသည်ဒကာကြီး။
(၃) ထေရ၀ါဒချင်း အတူတူလို့ ပြောနေတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်းကိုရော လူကြီးမင်း ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဟူသော ဒကာစိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ် ၏မေးခွန်းကိုဖြေရလျှင်။ထေရ၀ါဒဆိုသော အဓိပ္ပါယ်ကို နာလည်သိမြင်အောင် ဦးစွာရှင်းပြပါမည်။ ထေရ၀ါဒဆိုသည်မှာ “ထေရာနံ ၀ါဒေါတိ ထေရ၀ါဒေါ၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့သည် တရားဒေသနာတော်တို့ကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသက်တော်ထင်ရှား ရှိတော်မူစဉ်ကာလကအတိုင်း၊ “ပြုပြင်ခြင်း၊ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ပယ်နှုတ်ခြင်းမရှိ” ပဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တရားတော်မြတ်အတိုင်း သင်ယူခြင်း၊လိုက်နာခြင်း၊ဟောပြောပို့ချခြင်း၊ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် နေတော်မူကြသည့် သံဃာတော်မြတ်တို့၏ ၀ါဒကို ထေရ၀ါဒဟု ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဒေသနာတရားတော်အတိုင်းသင်ကြားခြင်း၊လိုက်နာခြင်း၊ ဟောပြောပို့ချခြင်း၊ကျင့်သုံးခြင်းမရှိသော အဓမ္မ၀ါဒီ မိုးပြာဂိုဏ်းသည် ထေရ၀ါဒ ဟုတ်၊မဟုတ်ဆို သည်ကို ဒကာကြီးတို့တွင် မူကြိုအဆင့်မျှ အသိပညာရှိမည်ဆိုက နားလည်သဘောပေါက် မည် ထင်ပါသည်။၄င်းမိုးပြာဂိုဏ်း၏ နောက်ကွယ်မှနေ၍ မည်သူတွေကအားပေးအားမြှောက် ထောက် ပန့်ပေးနေသလည်းဆိုတာကို ဒကာကြီးတို့ မူဆလင်ထိပ်ပိုင်းကို လေ့လာကြည့်လျှင် သိပါလိပ် မည်ဒကာကြီး။
(၄) နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်သော အရိမ္မတေယ(အရိမေတ္တယျ ဟုရေးမှသာမှန်၏) မြတ်စွာဘုရား ပွင့်မယ့်ကိစ္စကို ဘယ်လိုယုံကြည်ထားပါသလဲ? မေးခွန်းကိုလည်း ဥပမာလေးတခု ပြောပြလိုက်လျှင် ဒကာကြီးအနေဖြင့် အနည်းငယ်သော အသိပညာရှိလျှင် ရှင်းလင်းသဘောပေါက်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။
လောကမှာ အမြတ်ဆုံးသောဘုရားအဖြစ်ကိုရှိဖို့ဆိုတာကိုအသာထား B.A,B.Sc,ကဲ့သို့သော ဘွဲ့လေးတစ်ဘွဲ့ရရှိရန်အတွက်ကိုပင် ငယ်စဉ်အစကလေးဘ၀မှစကာမူကြို၊မူလ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအပြင် တက္ကသိုလ်အထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်တွေ၊ငွေတွေ ပေးဆပ်ဖြည့်ဆည်း ရတာမဟုတ်ပါလား၊ ရန်ကုန်ကိုသွားလိုလျှင် ရန်ကုန်ကိုရောက်သောကားတော့စီးဖို့လိုပါလိပ်မယ်၊ ဘယ်ဘုရားရှင်ကမှ ရော့အင့် B.A,M.A,ဘွဲ့တွေရစေဆိုပြီးလုပ်ပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘုရားအားကိုးပြီး စာမကျက်ပဲနေမည်ဆိုက ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ မှန်ကန်သောစာမေးပွဲအောင်နိုင်မည်မ ဟုတ်ပါပေ။ ဒီလိုလောကီဘွဲ့တစ်ခုအတွက်အတွက် အချိန်တွေ၊ငွေတွေ၊ကြိုးစားမှုတွေနှင့် ဖြည့်ကျင့်အားထုတ်ရသေး လျှင် ဘုရားအဖြစ်ကိုမည်သည့်အားထုတ်ဖြည့်ကျင့် ၊ကြိုးစားမှုမှမရှိပဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်၏၊မဖြစ်နိုင်၏ဆိုသည်ကို ဒကာကြီးကိုယ်တိုင်သာ အဖြေရှာပါဒကာ။
ဒကာကြီးဦးနေမျိုးဝေမှ ကုရ်အာန်စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ်ကာမေးခွန်ထုတ်သကဲ့သို့ ဒကာကြီး စိုက်ယဒ်ဟာဂျီဘေလားလ်နူးရ် အနေဖြင့် အဆင့်မြင့်မြင့် မေးခွန်းများစွာကိုထုတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်မိ ပါတယ်ဒကာ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒကာကြီးကို အကြံပြုမေးလိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဲ့သို့ တိကျရေ ရာသောဒကာကြီးတို့၏ အလ္လာ၏ အထ္ထုပ္ပါဒ်ဘ၀ဖြစ်စဉ် နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ရှိသော သောတာပတ္တိ၊ သကဒါဂါမိ၊အနာဂါမိ၊အရဟတ္တ စသည့် မှန်ကန်တိကျ အေးချမ်းသော ကျင့်စဉ်မျိုးကိုရှိပါသလော? ဒကာကြီးတို့အနေဖြင့် အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကာ “အမြင်မှန်ရကာ အမှားပြင်နိုင်၍ လမ်းမှားပယ်ဖျောက် လမ်းမှန်ရောက်ပါစေဟု ပတ္ထနာပြုလိုက်ပါသည်..။
(မိမိအကျိုး၊အများအကျိုးကို၊သည်ပိုးနိုင်သော တန်ဖိုးရှိ၊တန်ဖိုးမြင့်၊လူတော် လူမွန်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ)
BY YeYint Nge ... 4/24/2013 1 comment
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြင်ချင်တဲ့ (၁၉၈၂) နိုင် ငံ သား ဖြစ်ခွင့်ဥပဒေပါအချက်တချို့
သူလည်းပဲ မကောင်းခင်က ဆိုးခဲ့ဖူးပါသည်...
ကျွန်တော်တို့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြောင်းလဲလိုစိတ်ကို အသိအမှတ်ပြုပေမယ့် အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဗိုလ်ကျမှုတွေရှိခဲ့တာကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး၊ဦးသိန်းစိန် တပ်ရင်းမှူးဘ၀က မန္တလေးဘူတာကြီးမှာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့ဖူးတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်ပြောတာ မယုံတဲ့သူများမန္တလေးဘူတာကြီးက ၀န်ထမ်းအိုတွေကို မေးမြန်းလို့ရပါတယ်၊ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ၊ဒုဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းစိန် တပ်ရင်းမှူးဘ၀နဲ့ ရန်ကုန်ကို လိုက်ဖို့ မန္တလေးဘူတာကြီးကိုရောက်လာပါတယ်၊သူရောက်လာတော့ရန်ကုန်ရထားက သူ့အချိန်နဲ့ သူ ပုံမှန်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်၊အဲဒီလို သူ့ကို မစောင့်ဘဲ ထွက်ခိုင်းရပါ့မလားဆိုပြီး ရုံပိုင်ချုပ်ရုံးခန်းထဲဝင်ပြီး လက်သီးနဲ့ထိုးပါတယ်၊ရုံပိုင်ချုပ်က သူသောက်ဖို့ဆောင်ထားတဲ့ရေပုလင်း(အဲဒီခေတ်က ရေသန့်ဘူး မပေါ်သေးပါ)နဲ့ ရိုက်ဖို့ သူ့ရဲ့စားပွဲပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန် အားလုံးဝိုင်းဆွဲလို့ ပွဲကပြီးသွားပြီး နောက်ရထားနဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းစိန် လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်၊နောက်ရက်မှာပဲ ရုံပိုင်ချုပ် အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီး DSAတက်နေတဲ့ ရုံပိုင်ချုပ်သားလည်း အကြောင်းမပြဘဲ ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်တော့ ရုံပိုင်ချုပ်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျစွာနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်၊ဒါလေးဟာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ၊ဒီလိုရေးတာဟာ အခုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြောင်းလဲလိုစိတ်ကို မယုံကြည်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရောက်လာလို့ အရင် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို ချန်လှပ်လို့ မရပါဘူး၊သမိုင်းဟာ သမိုင်းပါ၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အခုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲကို ကြိုဆိုသလို သမိုင်းက အမည်းစက်ကိုလည်း မမေ့နိုင်တာ အမှန်ပါပဲဗျာ..သူသည်လည်း မကောင်းခင်က ဆိုးခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
Okkar Shwe Win == လက်မှတ်မရလို့ ထိုးတာဗျ ။ ရထားမစောင့်လို့ မဟုတ်ဘူး ။ သူ့ PSO လုပ်ခဲ့တဲ့ လူပြောပြဖူးတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရုတ် သံအမတ် အသစ် ယမန်နေ့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
r ...တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင်
စာလုံးနဲ့ မှား ၊ စာလုံးနဲ့ တောင်းပန် မလုပ်နဲ့လေ ။ ခမျာ ရပ်ကွက်ထဲမှာတောင် မနေရဲတော့ဘူး
တရားဝင်တောင် ၃ ယောက်
ရေနံပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းခ တစ်နှစ်လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လ...
သဘောတူစာချုပ် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ပါဝါ နှင့် အင်ဒိ...
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ပြေးဆွဲမည...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြင်ချင်တဲ့ (၁၉၈၂) နိုင် ငံ သား ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရုတ် သံအမတ် အသစ် ယမန်နေ့က လ...
စာလုံးနဲ့ မှား ၊ စာလုံးနဲ့ တောင်းပန် မလုပ်နဲ့လေ ။ ...